ယဉ်ကျေးမှု - သတင်းခရီးသွား | ခရီးသွားသတင်း
ဆားငန်သောမည်သည့်ကောင်းသောခရီးစဉ်မဆိုမြို့သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်ရှိအရေးအကြီးဆုံးယဉ်ကျေးမှုနေရာအချို့သို့သွားရန်အရေးကြီးသည် ဤကဏ္တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားထိုနေရာအချို့ကိုပြပြီးသင့်အားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းအချက်အလက်များပေးလိမ့်မည် ဥပမာပြတိုက်ဖွင့်ပွဲနေ့များ၊ လက်မှတ်များ၏စျေးနှုန်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သိရန်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပေါ်။ သင်၏ခရီးသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာထိတွေ့မှုရှိပါကသင်ရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးနေရာမှာသေချာသည်.
စပိန်နိုင်ငံ၏ အရေးကြီးသော အထိမ်းအမှတ်များ
por လူးဝစ် Martinez လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
စပိန်ရှိ အရေးကြီးသော အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံများအကြောင်း သင်နှင့် စကားပြောဆိုခြင်းသည် တိုတိုတုတ်တုတ် နှင့် ပေါင်းစပ်မှုကို အားထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အများကြီးရှိလို့...
por လူးဝစ် Martinez လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအကြောင်း ဒီဆောင်းပါးမှာ မင်းကို ငါတို့ပြောမယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကို ပြီးအောင်လုပ်ဖို့...
Acropolis၊ အဲဒါ ဘာလဲ။
အေသင်မြို့၏ Acropolis အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကြားဖူးသည်။ အဲဒါကို ကျနော်တို့တောင် ဖတ်ပြီး သွားကြည့်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်…
အီဂျစ်ပြည်၏ ပိရမစ်များကို မည်သို့တည်ဆောက်ခဲ့သနည်း။
por Mariela Carril လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
အီဂျစ်ပြည်၏ ပိရမစ်များသည် ကမ္ဘာ၏ ကြီးကျယ်သော လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ သီအိုရီတွေကို နားထောင်တဲ့အခါ သူတို့က မယုံနိုင်လောက်စရာ တစ်ခုခုပါပဲ…
por လူးဝစ် Martinez လွန်ခဲ့တဲ့2လအတွင်း .
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမြင့်ဆုံးမျှော်စင်များသည် မကြာသေးမီက တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လူသားသည် အမြင့်ကို ရှာဖွေခဲ့သည်...
စပိန်နိုင်ငံတွင် အမျိုးသားပထဝီဝင်နေရာအနှံ့ ပြန့်ကျဲနေသော ကတုတ်ကျင်းများစွာရှိသည်။ အဲဒါတွေက ငါတို့တိုင်းပြည်မှာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ စစ်ပွဲတွေရဲ့ အငွေ့အသက်တွေပဲ..။
por လူးဝစ် Martinez လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
Alhambra ၏ဇာတ်လမ်းများသည် အဖြစ်မှန်နှင့်လက်တွေ့ကြားတစ်ဝက်တွင် ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များအားလုံးကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသည်...
အမေဇုန်ဒေသရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေအကြောင်း မင်းနဲ့စကားပြောရတာ မလွယ်ဘူး။ ဤအမည်ဖြင့် နယ်မြေအကျယ်အဝန်း လူသိများသောကြောင့် ...
ကမ္ဘာမှာ ရှားရှားပါးပါး ရိုးရာဓလေ့တွေ
por Mariela Carril လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
ကမ္ဘာကြီးက တခြားအချိန်တွေထက် ပိုသာမန်နေရာလို့ ထင်မြင်လာတဲ့အခါ...
por Mariela Carril လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
ငါတို့အားလုံး တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ရေကူးကန်ထဲမှာ ရေချိုးဝတ်စုံတွေ ချွတ်ပြီး...
por လူးဝစ် Martinez လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
ဆွစ်ဇာလန်၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းများသည် အများစုတွင် ဥရောပအလယ်ပိုင်း သို့မဟုတ် ဌာနေတိုင်းရင်းသားတို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို တုံ့ပြန်သည်..။
တရုတ်နှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များ - သမိုင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ပထဝီဝင်နှင့်ဆွဲဆောင်မှု
အီတလီရှိ Lamborghini ပြတိုက်
ပီရူး၏ Folkloric မျက်နှာဖုံးများ